Izizathu eziqhelekileyo zoTshintsho OST Inkohliso yeFayile
Ikhaya iimveliso DataNumen Exchange Recovery Izizathu eziqhelekileyo zoTshintsho OST Inkohliso yeFayile
Izizathu eziqhelekileyo Vumela iMicrosoft Exchange OST Ifayile yonakele okanye yonakaliswe
Zininzi izizathu eziza kwenza ifayile yakho Shintsha ifolda engaxhunyiwe kwi-intanethi (.ostifayile yonakele okanye yonakele. Sizihlela ngokwamacandelo amabini, oko kukuthi, izizathu zekhompyutha kunye nezizathu zesoftware.
Nanini na xa izixhobo zakho zisilele ekugcineni okanye ukuhambisa idatha yoTshintshiselwano lwakho OST iifayile, iifayile ze OST iifayile ziya kuthi zonakale. Kukho iintlobo ezintathu ikakhulu:
Ukusilela kweDatha yokuGcina uLwazi. Umzekelo, ukuba idiski yakho enamacandelo amabi kunye noTshintshiselwano lwakho OST Ifayile igcinwe kula macandelo. Emva koko unokufunda kuphela inxenye ye- OST ifayile. Okanye idatha oyifundileyo ayichanekanga kwaye igcwele iimpazamo.
Ukusilela koqhagamshelo kunethiwekhi . Xa ungqamanisa i OST - fayile kunye neseva ngonxibelelwano lwenethiwekhi, ukuba amakhadi enethiwekhi, cables, imizila, iihabhu kunye naziphi na izixhobo ezenza uqhagamshelo lwenethiwekhi zineengxaki, emva koko inkqubo yokuvumelanisa iya kukhutshwa OST ifayile inokonakaliswa.
Ukusilela kwamandla. Ukuba ukusilela kwamandla kuyenzeka xa ungena okanye ungqamanisa OST iifayile, ezinokushiya ifayile yakho ye- OST iifayile ezonakeleyo.
Zininzi iindlela zokuthintela okanye ukunciphisa i OST ifayile yorhwaphilizo ngenxa yeengxaki zehardware, umzekelo, i-UPS inokunciphisa iingxaki zokusilela kwamandla, uthungelwano olungafunekiyo lunokunciphisa iingxaki zenethiwekhi, kwaye ukusebenzisa izixhobo zekhompyutha ezinokuthenjwa kunokunciphisa amathuba okonakala kwedatha.
Kananjalo utshintshiselwano oluninzi OST ukonakala kwefayile kwenzeka ngenxa yemicimbi enxulumene nesoftware.
Ukubuyiselwa kweFayile engalunganga. Unokufumanisa ukuba akukholeleki ukuba inkqubo yokubuyisela kwifayile inokubangela OST ukonakala kwefayile. Kodwa enyanisweni, ngamanye amaxesha xa inkqubo yakho yefayile yaphukile, kwaye uzama ukuqesha isixhobo sokubuyisa idatha okanye ingcali ukufumana kwakhona OST iifayile kuyo, iifayile ezifunyenweyo zisenokonakala, kuba:
Ngenxa yenkqubo yefayile yentlekele, ezinye iinxalenye zoqobo OST ifayile zi lost ngokusisigxina, okanye ubhalwe ngaphezulu kwedatha yenkunkuma, eyenza ukuba kugqitywe ukugcinwa OST ifayile engaphelelanga okanye enedatha engachanekanga.
Isixhobo sokubuyisela kwimeko yesiqhelo okanye ingcali ayinabo ubuchwephesha oboneleyo / inokuqokelela idatha yenkunkuma kwaye iyigcine njengefayile nayo.OST ulwandiso. Njengoko zibizwa njalo.OST iifayile azinayo nayiphi na idatha esebenzayo yeefayile zeFayile ngaphandle kweintanethi, azisebenzi kwaphela.
Isixhobo sokubuyisela okanye ingcali iqokelele iibhloko zedatha ezichanekileyo ze OST ifayile, kodwa ayizidibanisanga ngokulandelelana kwayo, ekwenza ukuba kugcinwe ukugcinwa OST ifayile ayinakusebenziseka.
Ke ngoko, xa inkqubo yefayile yentlekele isenzeka, kuya kufuneka ufumane isixhobo esichanekileyo sokubuyisela idatha / ingcali ukufumana kwakhona ifayile yakho OST iifayile. Isixhobo / ingcali embi iya kuyenza mandundu imeko endaweni yokuba ibengcono.
Intsholongwane okanye enye iSoftware enobungozi. Iintsholongwane ezininzi ziya konakalisa kwaye zonakalise utshintsho OST iifayile okanye zibenze bangafikeleleki. Kuyacetyiswa ukuba ufake isoftware esemgangathweni yokulwa intsholongwane kwinkqubo yakho ye-imeyile yokutshintsha kunye nokutshintsha.
Ukuyekisa ukujonga ngokungaqhelekanga. Kwimeko yesiqhelo, kuya kufuneka uyeke u-Outlook ngobubele ngokugcina lonke utshintsho lwakho kwi OST ifayile kwaye ucofa u "Phuma" okanye "Vala" imenyu yemenyu. Nangona kunjalo, ukuba i-Outlook ivaliwe ngokungaqhelekanga xa uvula, ungena okanye ungqamanisa OST ifayile, emva koko OST ifayile ithambekele ekubeni yonakaliswe okanye yonakaliswe. Oku kunokwenzeka ukuba ukusilela kombane okukhankanywe apha ngasentla kuyenzeka, okanye ukuba i-Outlook iqhuba ngokwenza into kwaye uyiyekise ngokunqakraza "Ukuphelisa Umsebenzi" kwi-Windows Task Manager, okanye ukuba ucima ikhompyuter ngaphandle kokuyeka i-Outlook kunye neWindows ngesiqhelo.
Impazamo yolungelelwaniso. Ungqamaniso phakathi kweefolda ezingaxhunyiwe kwi-intanethi kunye neseva kunokukhokelela kwiimpazamo ezininzi, kubandakanya amanani amakhulu ezinto zongquzulwano, azikwazi ukuvula izinto ezithile ze-Outlook, njl.
Ukusilela kwiinkqubo ze-Outlook. Yonke inkqubo ineentsilelo, ngokunjalo ne-Outlook. Ezinye iziphene zivela kwizinto ezimfutshane zabayili. Bahlala belindelwe kodwa akakwazi isonjululwe ngokulula ngokulungiswa okanye iipatches. Umzekelo, kwiintsuku zokuqala, abayili beMicrosoft abakholelwa ukuba kuyakubakho idatha eninzi kuyo OST iifayile, ngoko ke ubuninzi bobungakanani be OST Ifayile enokusetyenzwa yi-Outlook 97 ukuya ku-2002 yi-2GB yoyilo Kodwa kule mihla, unxibelelwano kunye nolwazi lomntu siqu lukhula ngokukhawuleza kangangokuba OST ifayile inyuka ngokumangalisayo. xa OST indlela yefayile okanye idlula i-2GB, iya konakaliswa. Ngelixa ezinye iintsilelo zibangelwa kukungakhathali kweenkqubo. Ngokubanzi, azinakulindeleka kodwa xa sele zifunyenwe, zinokusonjululwa ngokulungiswa okuncinci okanye iipatches. Umzekelo, xa i-Outlook idibana nempazamo engalindelekanga, izakuthi "IMicrosoft Outlook ifumene ingxaki kwaye ifuna ukuvalwa. Siyaxolisa ngale ngxaki.”Kwaye iphelise ngokungaqhelekanga, nto leyo enokubangela ukuba OST ifayile yonakele.
Iimpawu zorhwaphilizo OST iifayile:
Kwireferensi yakho, siqokelele uluhlu lweempazamo eziqhelekileyo kunye neengxaki kwi-Exchange OST ifayili, ezibandakanya iimpawu kunye nenkcazo eneenkcukacha xa OST ifayile iyonakaliswa.
Lungisa urhwaphilizo OST iifayile:
Ungayisebenzisa imveliso yethu yokuphumelela amabhaso DataNumen Exchange Recovery ukuba buyisa utshintsho lwakho olonakeleyo OST iifayile.